Kuendesa yako Blog ku "A-Chinyorwa" | Martech Zone
China, August 17, 2006 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Zvakanaka, izvozvi zvandinazvo pano, usapenga uye uende. Teerera kune zvandinokuudza.
Pane murazvo unoyambuka blogosphere izvozvi pane Nicholas Carr's Blog kutumira, Iyo Yakakura Isina Kuverengwa. Shel Israeri iri mukukakavara, sezvakaita toni yemamwe mabloggi (muenzaniso).
Unofanira kuverenga zvakazara zvaVaCarr usati waverenga zvandinofanira kutaura. Ndinovimba ndiri kufambisa meseji yake mushe… ndinofunga zvaari kutaura ndezvekuti kune vashoma vakanaka kwazvo "A-Chinyorwa" mablogiki zvekuti vamwe vese vanofanirwa kungokanda tauro.
Kana iwe uchida kusvika ku "A-Chinyorwa" cheiyo blogosphere, kutanga iwe unofanirwa kuona kuti chii icho chinyorwa icho. Zviri kwauri… kwete Nick Carr, kwete Technorati, kwete Google, kwete Yahoo!, Kwete Typepad kana WordPress. Iyo "A-Rondedzero" haina kutemerwa nenhamba yeahits iwe yaunowana, huwandu hwekutarisa peji, mibairo yawakagamuchira kana huwandu hwemadhora muaccount yako yeadenseense. Kana zvirizvo, unogona kunge uri kublogi nekuda kwezvikonzero zvisiri izvo.
Kugamuchirwa kuDouglaskarr.com, chimwe cheGreat Unread. (Zvakanaka, pamwe hazvina kunyanya kunaka)
Pane nyaya ndeye 'chikoro chekare' chekushambadzira midhiya. Mutemo iwoyo unoti kana maziso eziso achiona kushambadza kwako, zvauri nani. Chikoro chekare chinoti kana iwe uri kuwana mazana ezviuru ekuona peji, iwe uri kubudirira. Mazana mashoma uye iwe unofanirwa kunge uri kukundikana. Iwe uri chikamu cheiyo Yakakura Isina Kuverengwa. Chaizvoizvo kufunga kwakafanana kuri kukwevera pasi iyo Movie Indasitiri, iyo Pepanhau Indasitiri uye Network Television. Dambudziko nderekuti iwe unobhadhara mutengo wakakura kune iwo maziso eziso, pasina kudzoka. Dambudziko nderekuti iwe haudi iwo ese eyeballs, iwe unongoda kuendesa kushambadziro yako kumaziso eziso chairo.
Yangu "A-Rondedzero" haifanane naSeth Godin, Tom Peter's, Technorati's, Shel Israel, kana Nick Carr's. Handidi miriyoni verengi. Chokwadi, ndinofara sezvo nhamba dzangu dzichiramba dzichikura. Ehe ini ndoda kukura kuverenga nekuchengetedza kwevaverengi pane yangu blog. Asi ini ndiri kunyatsofarira vanhu vane matambudziko akafanana uye vari kutsvaga mhinduro dzakafanana seni.
Ini ndiri uyu quasi-kushambadzira-tekinoroji-geek-Christian-baba dude anogara muIndiana. Ini handisi kuzotamira kuNew York kana kuSan Francisco. Ini handisi kutsvaga kupfuma (asi handinganyunyuti kana ndikadaro!). Ndiri kushamwaridzana neboka rekushambadzira uye tekinoroji mukati nekukomberedza Indianapolis. Ndiri kudzidza nekufumura mabloggi kune 'angu' ruzhinji (vese vaviri gumi nemaviri kana zvakadaro!). Uye ndiri kugovera ruzivo rwangu, pfungwa dzangu, mibvunzo yangu, neruzivo rwangu nevanhu vazhinji vanofarira.
Iwe unoona, pandinowana chirevo kubva kuna Shel Israel, Tom Morris, Pat Coyle, mhuri yangu, shamwari, kana vamwe vanhu vandinoremekedza uye nekugovana navo… ndakatozviita ku "A-Chinyorwa". Kana iyo isiri yako pfungwa ye "A-Chinyorwa", zvakanaka. Pamwe ini handidi kuve pane yako. Isu tese tinoona budiriro zvakasiyana.
Chimwe cheZvisina Kuverengwa
Aug 17, 2006 na10:09 PM
ndinofunga wazvitaura zvakakwana. vanhu vanofanira kuyera pane zvinangwa kune zvavanotarisira. kana vangosvika ipapo, voenda kune rimwe dambudziko rinotevera.
Aug 17, 2006 na10:40 PM
Nzira yekuenda - kubvumirana zvachose.
Ndakaita pfungwa shoma pane iyi A-lister kurangana ini.
Kuda kukuru pane "quasi-marketing-technology-geek-Christian-father dude" bit, btw. Ndaigona kuzvirondedzera nenzira imwe cheteyo!
Great comment uye grwat post. Ndichabatanidza. Ndatenda
Uye rangarirai, Jesu akaparidzira zviuru, asi akangodzidzisa 12. Uye vane gumi navaviri vakanga vakatendeka. Uye tarisa kwayakaenda!!